Angon-kevitra ho an’ireo mpihaino rakipeo · Global Voices teny Malagasy
Omeo ny hevitrao hanampiana ny vondrona mpandrakipeo.
Voadika ny 03 Jona 2020 5:19 GMT
🎧Mpihaino rakipeo mahafatra-po ve ianao ? Sa ilay sendra mihaino tsindraindray? Nahoana no mila ny fanampianao izahay 🙏. Mitady tari-dàlana avy amin'ireo mpihaino rakipeo manerana izao tontolo izao ireo Vondronà Mpandrakipeo maniry ny hamelona indray ny rakipeo efa ampolotaonany maro, hamantaran-dry zareo ny fihainon-dry zareo mahazatra sy ny ankafiziny.
Azafady mba omeo ny fijerinao amin'ny alàlan'ny famenoana ity fanadihadiana fohy ity (sahabo ho 5 min ny mameno azy). Hohazonina ho tsiambaratelo manontolo ny valinteninao. Raha tsy mihaino Rakipeo ianao dia miangavy anao azafady mba hizara ny rohy https://tinyurl.com/podcast-survey any amin'ny tonton'ny tambajotranao. Hisokatra hatramin'ny 7 Jona ny fanadihadiana.